Ny NDR any Alemana dia mampifangaro ny StudioDirector 2.0 an'ny CGI ho an'ny Studio vaovao ao Hamburg | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Content Creation » Ny NDR any Alemana dia mampifangaro ny StudioDirector 2.0 an'ny CGI ho an'ny Studio vaovao ao Hamburg
Vahaolana vaovao manatsara ny studio vaovao NDR ho efitrano fanaraha-maso tohanan'ny automation
CGI, ny mpanolotra rafi-baovaom-baovaom-baovao eto Eropa dia faly manambara fa ny Norddeutscher Rundfunk (NDR) any Alemana, mpikambana ao amin'ny ARD Group, dia nampiditra StudioDirector 2.0 ao anatin'ny ekosistem-birao OpenMedia misy azy.
Ny fampielezam-peo NDR fampielezam-peo sy fahitalavitra ho an'ny fanjakana Alemanina any Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein ary Hamburg, ary lasa mpanjifa CGI (Annova tamin'izany fotoana izany) 15 taona mahery lasa izay rehefa nampihatra rafi-pivoarana OpenMedia ho an'ny ireo mpiasan'ny famokarana vaovao. Ny fampiharana ny StudioDirector 2.0 avy amin'ny CGI dia manaraka ny hetsika stratejika NDR hampandeha ny studio NDR1 vaovao ho efitrano fanaraha-maso tohanan'ny automation mba hamoahana ny endrika magazine magazine “Hamburg Journal” sy ny endrika vaovao “NDR-Info”.
Rehefa noforonina hatrany am-boalohany ny tantara dia manomboka tsy voasivana ary noho izany dia mitaky asa fanampiny alohan'ny ahafahany mihazakazaka tsara ao amin'ny rafitra automation. Ny fampidirana ny StudioDirector 2.0 ao amin'ny rafitry ny efitrano malalaka OpenMedia an'ny NDR dia ahafahan'ny mpiasan'ny famoahana azy hifantoka amin'ny atiny sy ny fampisehoana tantara an-tsehatra hisorohana ny tolona amin'ny torolàlana ilaina na modely mandeha ho azy na mampifanaraka ny endrika fampisehoana vaovao.
Ny StudioDirector 2.0 an'ny CGI dia mamela ireo fikambanan-gazety hamoahana ireo asa tsy mitombina sy miverimberina toy ny fampidirana ny kaomandy MOS (mpizara zavatra haino aman-jery) ary manome antoka fa ny sary rehetra takiana dia ampifandraisina na alefa alohan'ny hidirany. Ny mpanao gazety sy ny talen'ny dia afaka misafidy ny firafitry ny studio tadiavina amin'ny tantarany amin'ny seho iray avy amin'ny lisitr'ireo modely efa voafaritra. Mampitombo tokoa ny fahombiazany amin'ny alàlan'ny famoahana fotoana fanontana sarobidy ary hampihenana ny mety hisian'ny lesoka, indrindra raha ny fanovana amin'ny minitra farany amin'ny tantara mandeha haingana.
Ny tombotsoan'ny StudioDirector 2.0 dia ny fampiasana azy mora foana, mandeha ho azy ny zava-drehetra ary mifandray amin'ny rafitra efa misy IP ny fitaovana. StudioDirector 2.0 dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fifampiraharahana eo amin'ny rafitra fanitsiana sy ny automatisation control room. Tao anatin'ny ezaka niaraha-niasa sy niorina teo amin'ny NDR sy ny CGI, betsaka kokoa noho ny fitaovana na fiasa azo ampiasaina no noforonina - filozofia vaovao iray momba ny fomba namokaran'ny ekipa editorial sy ny ekipan'ny famokarana fandaharan'asa fifanakalozana mivantana. Miaraka amin'ny fametrahana StudioDirector 2.0 vaovao NDR dia afaka mampiasa ny fahafaha-miasa feno amin'ny rafitra OpenMedia ao amin'ny studio sy galeria, izay manampy azy ireo hahatratra ny ambaratonga manaraka amin'ny ho avy.
Momba ny CGI
Niorina tamin'ny 1976, CGI dia iray amin'ireo orinasa lehibe mpanampy momba ny informatika sy orinasa eto amin'izao tontolo izao. Miasa amin'ny toerana an-jatony manerana an'izao tontolo izao, ny CGI dia manolotra serivisy sy vahaolana maharitra, anisan'izany ny informatika stratejika sy ny fakan-kevitra momba ny orinasa, ny fampidirana ny rafitra, ny serivisy fitantanana IT sy ny fizotry ny asa ary ny vahaolana momba ny fananana ara-tsaina. Ny fampitambaran'ny CGI tamin'ny SCISYS Group PLC tamin'ny desambra 2019 miaraka amin'ny fahaiza-manao lalina amin'ny sehatry ny haino aman-jery sy ny fampielezam-peo, ary koa ny sehatra malalaka sy fiarovana. Media Solutions an'ny CGI, SCISYS Media Solutions teo aloha, dia manolotra vahaolana isan-karazany momba ny vaovao sy ny fanomezana atiny ho an'ireo orinasan-tserasera vaovao manerana ny tsena eo an-toerana, nasionaly ary iraisam-pirenena. Tafiditra ao anatin'izany ny rafitry ny efitrano malalaky ny tsena OpenMedia sy ny vahaolana famokarana onjam-peo, manompo mpilalao lehibe amin'ny fandefasana sy fandefasana.
Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho: www.cgi.com/ Mediasolutions
Next: Sony Elektronika dia mandefa ny fanampim-baovao farany ho an'ny andian-tsarimihetsika feno G Master ™ miaraka amin'ny maivana sy Compact 35mm F1.4 G Master ™